Soro Castzọ Castle nke Scottish | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Ido Scotland, Nduzi
Great Britain bụ ezigbo oge ezumike ebe ọ bụ na ọ na-agwakọta ọdịdị, ọdịbendị na ọtụtụ akụkọ ntolite. N'ime agwaetiti a mba nke pụtara ìhè bụ Ido Scotland, na nde mmadụ ise bi na ya na ọmarịcha isi obodo ya, bụ́ Edinburgh.
Ọ bụrụ na-amasị gị ochie castles, a na-aga na Europe dị ukwuu n'ihi na fabulous wusiri ike e wuru ebe a na-guzo ule nke oge na ndidi oké protagonists nke oké oge na mpaghara akụkọ ihe mere eme. E nwere ọtụtụ ụlọ, nke mere na ụlọ ọrụ na-eme njem nleta na mba ahụ ewepụtala ụzọ pụrụ iche: Zọ nke Castles nke Scotland. M gwa Abigel a ndaeyo njem: ịgbazite ụgbọ ala na ị maara ya.
1 Ido Scotland
2 'Szọ Castle nke Scotland
3 Daybọchị 1
4 Daybọchị 2
5 Daybọchị 3
6 Daybọchị 4
7 Daybọchị 5
8 Daybọchị 6
Ala ndị Scottland enweela mgbanwe mgbanwe ihu igwe na mbara ala, afọ ice emeela ọdịdị ala na ọ bụ ya mere ọdịdị ala ha ji dị iche na isi okwu anọ. Aha obodo ahụ sitere na okwu Latịn Scoti nke bụ etu ndị Rom si akpọ aha ndị bi na ha. Ruo ogologo oge, a na-ejikwa okwu Alba, nke sitere na asụsụ ahụ n'onwe ya, mana Scotland malitere ịmụrụ ewu na Middle Ages.
Ugbua na Middle Middle Ages Alaeze nke Picts na-ebilite na akụkọ ihe mere eme na-aga n'ihu n'etiti agha, alụmdi na nwunye ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mmetụta nke alaeze ndị agbata obi ruo mgbe na 1707 Scotland sonyeere alaeze England n'ime alaeze Great Britain. Njikọ ahụ ka dị ugbu a na uwe mkpuchi na ogwe aka ụfọdụ, mana nke kachasị mkpa, Scotland na-aga n'ihu na-arụ ọrụ dị ka mpaghara nweere onwe ya na iwu nke ya.
'Szọ Castle nke Scotland
Ọnụ ọgụgụ ụlọ ndị dị na ala Scottish bụ ihe na-egosi na akụkọ ntolite nke mba a enwebeghị udo kama kama nke ọzọ. N’akụkụ obodo ahụ, e nwere ihe karịrị ụlọ 300, ụlọ ndị mara mma na ala ndị na-adịghị ike, ma ụzọ ahụ na-elekwasị anya nke kachasị mma, nke kachasị ama na nke kachasị dị egwu. Y ha niile dị n’ime obodo Aberdeenshire, saịtị a maara dị ka Obodo.
Routezọ na-atụ aro a njem ụbọchị isii a na-edekwa ya na akara nchara nchara na-acha ọcha na-acha ọcha gafere mpaghara ahụ dum. Sixbọchị isii na ọtụtụ ụlọ mara mara ma echefula.
Na nso obodo Aberdeen, enwere ọtụtụ ụlọ, yabụ ihe kachasị mma bụ ịtọ ntọala ebe a ụbọchị mbụ ma gaa njem. Na ngụkọta ụzọ nke naanị kilomita 35 ị nwere ụlọ atọ iji hụ: Dunnottar Castle, Ceathes Castle na Castle Drum.
Dunnottar Castle dị na Stonehaven. Ọ bụ mkpọmkpọ ebe a rụrụ n’elu ugwu dị elu n’elu Oké Osimiri Ugwu. Ọ maara otu esi echekwa ọla okpueze ndị Scottish n'aka ndị agha Cromwell na ọ jiri ya ugboro abụọ na fim, na 1991 maka ihe nkiri ahụ Hamlet, site n'aka Franco Zefirelli, na nso nso a na Victor frankestein. Ọ na-emeghe n'afọ niile ma ọnụ ụzọ mbata bụ 7 pound kwa okenye, yana onye ndu gụnyere.
Castle Crathes bụ ihe mara mma ma mara mma ụlọ elu Narị afọ nke XNUMX gbara ubi gburugburu. O dozirila uko ụlọ, ụlọ elu, steepụ ndị dị gburugburu, na turrets. Ugbo ahụ meghere n'afọ niile ma lelee oge nnukwu ụlọ. Ntinye bụ £ 12.
N'ikpeazụ, Dlọ Drom Ọ bụ ụlọ nke ezinụlọ Irving ruo narị afọ isii na ọkara na ọ wuru na XNUMX narị afọ. O nwere otutu ihe osise na ihe ndi mgbe ochie gbara ya gburugburu ya na ubi oma. Ọ na-efu 12 pound.
N'ime ubochi nke abuo n'okporo uzo ndi Scottish, uzo a na-aga odida anyanwu na ugwu nke Aberdeen. Gụnyere nnukwu ụlọ Fraser, Tolquhon, na House Haddo. Castle Fraser sitere na narị afọ nke XNUMX ọ dịkwa mma nke nwere ọnụ ụlọ ya ndị buru ibu, arịa ya na ubi ya na ogige ntụrụndụ ya. Enwere ụlọ tii na-arụ ọrụ na kichin na narị afọ nke 10 na nke ahụ bụ ihe na-atọ ụtọ. Ntinye bụ £ 50.
A na-ahụta Tulquhon Castle dị ka otu n’ime ihe mara mma na Scotland. E wuru ụlọ elu a magburu onwe ya n’elu ụlọ elu dị nnọọ elu. Ọ na-emepe n’oge ọkọchị n’etiti 9:30 ụtụtụ ruo 5:30 elekere anya na nnabata dị ọnụ ala, kilogram 4. N'ikpeazụ enwere Haddo House, emebere na 1732. Ọ bụghị nnukwu ụlọ ma ọ bụ otu n'ime ebe obibi mbụ ahụ hụrụ ìhè mgbe ịkwụsị ọgụ. Ọ bụ ụlọ nke ezinụlọ Gordon maka afọ 400 ma nwekwaa arịa na ihe ịchọ mma pụrụ iche. Ntinye na-efu £ 10 ma na-eduzi nleta ahụ.
Zọ ahụ gara n'ihu na Fraserburgh, n'ụsọ osimiri Moray Firth. Gụnyere nkwụsị atọ ọzọ: Fyvie Castle, Delgatie Castle, na Kinnaird Head Castle. Castle Fyvie dị nkeji 50 site na AberdeenỌ dị narị afọ asatọ ma nwee ime ime Edwardian. O zuru oke maka iche n'echiche ụdị ndụ dị mma kwa ụbọchị dị ma nwee ọmarịcha nchịkọta nke ngwa agha, ngwa ọgụ na arịa ụlọ. O nwekwara ogige a gbara ogige na ụlọ ịgba tenis site na 1903. Na ụlọ tii. Ihe niile maka £ 12.
Glọ Delgatie si na 1030 ọ dịkwa ka ụlọ mmadụ bi. Chebe ime ụlọ nke Mary, Queen of ScotsEzigbo oke ọnụ, arịa mara mma, uwe Victoria na ihe ịchọ mma. Nwere ike iri nri ehihie ma dinakwa n'otu n'ime ụlọ ya. Ọ na-emepe site na Jenụwarị ruo Disemba site na 10 nke ụtụtụ ruo elekere ise nke mgbede ọ bụ ezie na n'oge oyi ọ na-emechi otu awa tupu mgbe ahụ. Ọ na-efu 5 paụnd.
Kinnaird Head Castle bụ akụkụ nke ishlọ Ahịa Scottish Scottish na e wuru na 1570- Lee anya n'elu mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri nke Fraserburgh na o nwere ulo oku di n’obi ya. Rịba, tiketi na-efu 7 pound.
The Duff Mansion bụ otu n'ime ụlọ ndị mara mma na mba ahụ. Lọ nnukwu ọnụ ụlọ ndị Georgia dị n'etiti nnukwu ogige na ọtụtụ nchịkọta arịa na eserese. Enwere ụlọ tii na ịzụ ahịa n'ime ya ma ị nwere ike ịgagharị na ogige ndị dị n'akụkụ Osimiri Deveron. Ntinye bụ 7, 10 pound.
Bọchị a na-esochi Ezumike Huntly, emi odude ke akpa akpa akpa. Ọ bụ ebe obibi nke barons maka narị afọ ise na guzo n’elu ebe e wusiri ike ochie nke Robert de Bruce wuru na narị afọ nke iri na anọ. Ntinye bụ £ 5. Mgbe ahụ e nwere Spynie Obí, ụlọ ezumike nka nke ndị bishọp nke Moray narị afọ ise. Ọ na-emeghe naanị n'oge ọkọchị na ụgwọ nnabata admission 8.
Finalmente Castle Balvenie dị mkpọmkpọ ebe mana ọ ka dị ukwuu. Ọ bụ ebe ndị iro Robert de Bruce wusiri ike, bụ Black Comyns, na narị afọ nke 4, mana ọ ghọrọ ụlọ obibi Renaissance ọtụtụ narị afọ mgbe e mesịrị. Ọ na-emepe n’oge ọkọchị ma na-efu pound 50.
N'ụbọchị a, e nwekwara nleta atọ: Leith Hall, Castle Kildrummy na Castle Castle. Leith Hall dị nso na Huntly ma ọ bụ a ahụkarị ezinụlọ Scottish ebi ya na akụ nke ọgbọ iri nke ezinụlọ, Leith-Hay. Ntinye bụ £ 10 na njem nlegharị anya dị.
Ekwenyere na Ildlọ Kildrummy Ndi Bekee na-awakpo ya wuru ma obu megharia ya n'okpuru ọchịchị nke Eze Edward I. Ọ bụ ogologo oge ebe ewusiri ike nke Counts nke Mar ma taa ọ bụ mkpọmkpọ ebe. Ma lee mbibi ọ bụ! Ọ bụ magburu onwe ihe atụ nke ihe a nnukwu ụlọ anya dị ka na XNUMX narị afọ ma site na ebe a, na 1715, Nkpalite Jekọb malitere. Ọ na-emeghe naanị n'oge ọkọchị ma na-efu 4 pound iji gaa.
N'ime Cairngorms National Park, ụlọ ụlọ elu a bụ ebe obibi nke ezinụlọ Forbes dị mkpa: Galọ Corgaff. Ọ bụ ụlọ mkpọrọ maka ndị Jekọb na ọ bụ ya mere eje ozi na-enye gị a lee anya na ndu ndi agha na XNUMXth century. Naanị na-emeghe n'oge ọkọchị ma na-efu £ 5.
Anyị mechara rute na njedebe nke Nsoro nke Castles nke Scotland, ụzọ nke na-enye anyị ohere inyefe onwe anyị otu ụbọchị paunch nke ulo-elu na ebe ochie ewusiri ike. Ọ bụ ntụgharị nke Castle Braemar, Balmoral na Craigievar.
Emlọ Braemar dị ka ihe sitere na akụkọ ifo. Ọ bụ n'ime Cairngorms National Park na Emere ya na 1628. O nweela ime ụlọ, e nwere ụlọ mkpọrọ ma, ha na-ekwu, ghosts na graffiti nke ndị agha ebe a na ebe ahụ. Ndị ndu a na-eduzi ndị mmadụ ji ịnụ ọkụ n'obi na-eduzi WiFi dị. Ọ na-efu 8 paụnd.
Castle Balmoral bụ nke a kacha mara amara n'okporo ụzọ ahụ n'ihi na ọ bụ ụlọ nke ezinụlọ eze. Nwanyị nwanyị Victoria na-anọkarị ogologo oge na mpaghara ugwu ugwu Scottish, yabụ enwere ogige ndị mara mma, ebe a na-agba bọl, ebe a na-ere ihe ọ andụéụ na ebe a na-ere ihe ncheta. The tour bụ na audio ndu na a na-enwekarị ihe ngosi. Ntinye bụ £ 11.
N'ikpeazụ enwere Craigievar Castle, nnukwu akụkọ ifo ndị ọzọ ọbọp ke obot. N'ime na n'èzí ọ mara mma ma ị nwekwara ike ịnụ ụtọ ubi ya. Ọ na-efu £ 12 kwa okenye.
Dị ka ị hụrụ, lọ Route nke Castles nke Scotland bụ eriri nke ebe ndị mara mma, dị mma ime n'oge ọkọchị. O doro anya na enwere ụlọ nke masịrị gị karịa nke ọzọ, nke ị na-agaghị eleta, nke ọzọ ị na-agaghị efu, mana ọ dị m ka ịgbazite ụgbọ ala na ịgbaso ụzọ a ga-enye gị ncheta na-agaghị echefu echefu nke ịma mma ebumpụta ụwa na akụkọ ihe mere eme nke nnukwu obere mba nke Great Britain.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Ido Scotland » Soro Castzọ Castle nke Scottish
Obodo iri kachasị na-eleta na Spanish
Ebe kachasị mma na Tuscany iji gaa